Ambongadiny vera fitaratra zavakanto chandelier toetra tsotra chandelier tsotraChandelier PC305 Mpanamboatra sy mpamatsy | Langsheng
Glass glass art chandelier toetra chandelier tsotra chandelierChandelier PC305
Style: Loharano maivana Avaratra
Toerana azo ampiharina: efitrano fandraisam-bahiny
Fanasokajiana loko: savaivony 8 loha 50 9 savaivony loha 60 10 savaivony lohan'ny jiro 80 jiro
Fitaovana lehibe amin'ny jiro: vera
Karazan-loharano maivana: LED
Isan'ny loharano maivana: 6
Fomba fanodinana: faritra mampirehitra elektrika: 15-30 M2
Ampiasao ny fahaizan'ny Mid-Century amin'ny haingo an-tranonao miaraka amin'ny chandelier Ludlow mahafinaritra. Ity lamaody lamaody Retro ity dia misy baravarankely starburst mamirapiratra miaraka amin'ny globe fitaratra madio. Ny jiro vokarina dia milalao tsara amin'ny famaranana volamena ny lalao.
Moa ve ianao eo anelanelan'ny famolavolana antitra sy ankehitriny? Azonao atao ny miaraka amin'ny Ezra Chandelier. Ity jiro pendant tsara tarehy ity dia hanandratra sy hanazava ny efitrano fandraisam-bahininao amin'ny endriny miramirana. Ny vodiny manify dia manana famaranana varahina fahagola ary misy amboaran-tsiranoka fitaratra madio. Ataovy miaraka amina haavo maromaro ny pcs maromaro hamoronana cluster tsara tarehy.
Ny volamena vita Salasco Chandelier dia misy fiakanjo marevaka tsara tarehy. Ny tsorakazo tsirairay dia voahitsakin'ny alokaloky vera vita amin'ny kristaly vita amin'ny kofehy diamondra. Raha vao may ny jiro LED mitambatra dia manome taratra tsara amin'ny valindrihana sy ny rindrina manodidina.
Hypnotic miaraka am-peony amin'ny hatsarana est Retro, ny Pontil Collection nataon'i George Kovacs dia manasongadina alokaloka fitaratra Etched White mihantona avy eo amin'ny sehatry ny foibe. Ity fanangonana tsara tarehy ity dia azo jerena ao anaty Nickel Brushing manjelanjelatra na famaranana Honey Gold mafana ary nohazavaina amin'ny takamoa Xenon. Ny fanangonana Pontil dia mamorona silhouette amin'ny tapaky ny taonjato izay mahasarika ny maso.
Ny fananganana vy maharitra dia natsangana haharitra ary manome endrika madio sy madio
Mampiasa takamoa G9 xenon G9 miisa 60-Watt
Mifanaraka amin'ny dimmer mahazatra
Ny vera opal vita amin'ny taolam-paty dia miteraka mamirapiratra tsara rehefa manazava
Ahitana ampahany amin'ny fanangonana sy fametrahana
Ampahany amin'ny fanangonana an'i Pontil nataon'i George Kovacs
Glass vera kanto chandelier toetra chandelier tsotra chandelier
Teo aloha: Chandelier pc-8233 toetra vy jiro injeniera jiro injeniera vaovao Chandelier
Manaraka: Chandelier PC-207 Metal Fabric Light Engineering Chandelier Art Chandelier
Chandelier 33766 Royal Candle Chandelier kanto
Chandelier PC061 Architectural tsotra riser mo ...
Chandelier PC311 Nordic ravaka haingo pers ...
Chandelier 33765 Crystal labozia fomba tsotra h ...
Chandelier 33796 Retro labozia villa Cha ...
Chandeliers SPWS-C009 tsotra maoderina mahafinaritra ...